नेपाल आज | अवसरवादी लाहुरेका कारण संकटमा सुदूरपश्चिमको माओवादी केन्द्र !
बुधबार, २७ असोज २०७८ गते प्रकाशित - नेपाल आज
माओवादी केन्द्रले नेता लेखराज भट्टलाईकार्वाही गरेपछि लामो समयदेखि नेकपा (माओवादी केन्द्र) सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी नेत्रृत्व विहिन थियो । केही महिनाअघि ईन्चार्जमा खगराज भट्टलाई जिम्मा दिइएता पनि प्रदेश समितिले पुर्णता पाएको थिएन । उक्त पार्टीको केन्द्रिय कार्यालयले असोज १५ गते जारी गरेको परिपत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका १३ जना केन्द्रिय सदस्य मध्ये ६ जनालाई प्रदेश सह–ईञ्चार्ज बनाएको छ । जनवादको ओकालत गर्ने पार्टीले माओवादी केन्द्रका बहुमत नेता–कार्यकर्ताद्वारा रुचाइएका अध्यक्षका प्रत्यासी नरेन्द्र बहादुर कुँवर लाई अध्यक्ष नबनाएर जनवादको धज्जि उडाएको छ ।
आमकार्यकर्ताले रुचायता पनि प्रदेश अध्यक्ष कुँवरलाई नबनाउनुमा अध्यक्षकी प्रत्यासी विना मगर हुन् । विना मगर सुदूरपश्चिम प्रदेश माओवादी केन्द्रमा जुनियर नेतृ हुन । विनाले अध्यक्ष प्रचण्डको बुहारी भएको भरपुर फाईदा लिदै आफु भन्दा धेरै सिनियर नेता हुदाँहुदै प्रदेश सह–ईञ्चार्ज बन्न सफल भइन यद्यपी आलोचनाकाविच प्रदेश अध्यक्ष भने बन्न सकिनन् ।
नरेन्द्र कुँवरलाई प्रदेश अध्यक्ष हुन नदिन पटक–पटक मुल पार्टी र माओवादी आन्दोलनलाई धोका दिँदै अवसरको खोजिमा पुनःमाओवादी केन्द्रमा समाहित हुने समुहले भरपुर शक्तिखर्च गर्यो ।
त्यसोत, अहिले सुदूरपश्चिमको माओवादी केन्द्रमा अवसरवादी लाहुरेहरूले आफ्नो छुट्टै गुट बनाउदै ईञ्चार्ज खगराज भट्टका विरुद्ध उक्त गुट परिचालन गर्दै आएका छन् भन्ने गरिन्छ । यस्तो गतिविधिले अन्ततः पार्टीलाई नै प्रत्यक्ष असर परिरहेको माओवादी केन्द्रका शुभेच्छुक बताउँछन् ।
हालै पार्टीकेन्द्रले प्रदेश कमिटीमा केही नेताहरुलाई दिएको जिम्मेवारी विभेदकारी र अस्वभाविक भएको पुर्व जनमुक्तिसेनाका कमाण्डर लाल बहादुर सोडारीको धारणा छ । कुन मापदण्डका आधारमा मुल्याङकन गरेर सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्रका पदाधिकारी तोकियो भनेर नेता कार्याकर्ता अन्योलमा छन् साथै अध्यक्ष प्रचण्डको यो निर्णयप्रति आक्रोशित पनि छन् ।
पार्टीको वर्तमान निर्णयले भुगोलमा जनतामा भिजेका नेताहरुलाई निरुत्साहित पारेको छ भने शक्तिकेन्द्रको चाकरी गर्नेहरुलाई उत्साहित पारेको देखिन्छ । प्रदेशको जिम्मेवारी तोकिदा योगदान, सिनियारिटी तथा एकताको मर्मलाई नै आत्मसात गरेको देखिदैन । आसेपासे, चाकरीवाल र अवसरवादीलाई पदको उपहार दिएजस्तो वाहेक केही होईन भन्ने माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताको धारणा बनेको छ ।
पार्टीका नेता तथा तत्कालिन जनमुक्ति सेनाका सिनियर कमाण्डरहरु मान बहादुर धामी सन्तोष, लाल बहादुर सोडारी, मिन बाहादूर कुवँर विश्वास, नरेन्द्र कुवँरलाई अहिले पाखा लगाइएको छ । त्यसैगरी पार्टीका सिनियर नेताहरु हरि चौधरी, देवराज रेग्मि, जनक बुढा, मानसिंह माल, जंग बिक, हरि ज्ञवाली, टेकेन्द्र भट्ट, रेणु चन्द, देवकी मल्ललाई पाखा लगाउदै पार्टी केन्द्रले जुनियर नेताहरुलाई प्रदेशको सह–ईञ्चार्ज र जिल्ला ईञ्चार्ज बनाएको छ ।
आफ्नो वडामा जमानत जफतहुने खालको जनमत भएकालाई एकताको नाममा पटकपटक मौका पाउँदा सिनियर नेता हरि ज्ञवाली नराम्रोसँग पेलानमा परे । यस्तै समावेशि सिद्धान्तको जननी पार्टी माओवादी केन्द्रमा दलित तथा पहिलो पुर्णकालिन माओवादी नेता जंग विकलाई कहिल्यै समावेशिताले छोएन ।
पछिल्लो समयमा नेकपा माओवादीकेन्द्र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चुनावमा पार्टी नेतृत्वलाई हराउन लागि पर्ने, चुनावको मुख्खैमा अरु पार्टीमा प्रवेश गरी माओवादी हराउन मरिमेट्ने, पार्टी–आन्दोलन संकटमा भएकाबेला भाग्ने तर सुविधाको बेला, अरुले बनाएको पार्टी, संगठनमा शक्ति केन्द्र धाउँदै नेता बन्ने तरमारा गुट निक्कै हावी भएको देखिन्छ । यस्तो समुहलाई सुदूरपश्चिमको माओवादी केन्द्रमा "अवसरवादी लाहुरे समुह" भन्ने गरिन्छ । जसको वर्चस्व सतहमा अहिले हाबी छ ।
त्यस्तै अस्तित्व संकटमा परेका नेता मध्ये प्रदेशकै वरिष्ठ देवराज रेग्मी हुन । रेग्मीले द्धन्द्धकालमा हुँदाखाँदाको शिक्षकको जगीर राजिनामा गरेर जनयुद्ध रोजेका थिए । तत्कालिन अवस्थामा जनयुद्ध थालनीहुँदा सुदूरपश्चिमा पार्टी संगठन निर्माणमा कठिन समयमा कामगरे । पार्टीको निर्देशन अनुसार नै निम्न जनमत भएको क्षेत्रबाट दूई–दूई पटक प्रत्यक्ष तर्फको चुनाव फेस गरे । निम्न जनमत कै कारण दुवै पटक पराजय भोगेका रेग्मीलाई यद्यपी प्रदेशमा आम कार्यकर्ताले अभिभावकका रुपमा सम्मान गर्दछन् ।
रेग्मी पार्टीभित्र स्पष्ट वक्ता मानिन्छन् । पार्टी भित्रको बेथिती, नातावादर विभेदका विरुद्ध रेग्मी निरन्तर आवाज उठाउदै आएका थिए । पार्टी शुद्धिकरणका लागि आवाज उठाउँदा आफु धेरै पटक उपेक्षित हुनुपरेको रेग्मि गुनासो गर्छन् । यसपटक पनि प्रदेश कमिटीमा रेग्मीलाई जिम्मेवारी विहिन बनाएर अघोषित कारबाही गरियो ।
पार्टीभित्र फरक मत राखेकै आधारमा अघोषित कारबाही गरिएकै कारण नेकपा माओवादी केन्द्र बझाङका जिल्ला अध्यक्ष मिन बहादूर कुवँरले असन्तुष्टि पोखेकाछन् । पार्टीभित्रका आन्तरिक वेथितीका विरुद्ध फरक मत राखेकै आधारमा पेलिनु वा किनारा लगाइनु क्रान्तिकारी पार्टीमा असह्य हुने अध्यक्ष कुवँरको धारणा छ । उनि फेसबुकमा लेख्छन्, ‘आज बिश्वका पुँजिवादीहरुले समेत आफ्नो कम्पनीलाई प्रतिश्पर्धी र सक्षम बनाउन समर्थक र बिरोधी नभनी सर्वसाधारण लाई समेत शेयर बिक्री गरेर अगाडि बढिरहेका छन् भने हाम्रो जस्तो हजारौं शहिद, घाइते, लाखौं कार्यकर्ता र जनताको बलिदान र पसिना बाट निर्मित पार्टीमा फरक मत राख्ने वा सुझाव दिने नेता र कार्यकर्ता लाई निषेध गर्ने, प्रतिबन्ध लगाउने नेतृत्वको नियतले आन्दोलनको भविस्य के होला? गम्भीरता पुर्वक सोच्ने की लम्पसारवादी हुने ।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एमालेको संयुक्त गठबनधनको चुनावमा सुदूरपश्चिममा एकमात्र प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचनमा बझाङ–ख, बाट साँझा उम्मेद्धवार माओवादी नेतृ देवकी मल्ल बनिन् । महिलाहरुलाई समानुपातिक कोटामा राख्ने चलनका विच प्रत्यक्षको उम्मेद्धवार बनाउनु बझाङ माओवादी केन्द्रका लागी सामान्य थिएन ।
चुनावमा विजयी भएपछि नेता कार्यकर्ताले देवकी मल्ल मन्त्रि बन्ने आशा गरेका थिए तर सुदूरपश्चिम सरकारको पटकपटक मन्त्रिमण्डल फेरबदल गर्दापनि प्रत्यक्ष निर्वाचित मल्ल मन्त्रिमण्डलमा परिनन् । नेतृ मल्ल मन्त्रिमण्डलमा समावेश नहुनुले बझाङमाथी नै अन्याय भएको माओवादी केन्द्र बझाङका नेता धर्म राज स्नेहीको धारणा छ ।
पटक–पटक प्रदेशका नेता कार्यकर्ताको माग र भावना एउटा हुने तर पार्टीको स्थायी कमिटीले नेता कार्यकर्ताको भावना विपरित निर्णय गरेर पठाउने प्रवृतीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी कठिन परिस्थितिबाट गुज्रीरहेको छ । चुनाव नजिकिदै गर्दा पार्टी भित्रको आन्तरिक विवाद समयमै हल नभए माओवादी केन्द्रले ठुलो मुल्य चुकाउनु पर्ने देखिन्छ ।
(यो लेख माओवादी केन्द्रका सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरिय एकजना नेताद्धारा तयार पारिएको हो)
संकटमा माओवादी केन्द्र